Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်)
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cyclophosphamideအား ကင်ဆာအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြ၏။ ၎င်းသည် ဆေးသွင်းကုသောဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဆဲလ်ကြီးထွားမှုအားနှေးစေခြင်း သို့ ရပ်စေခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Cyclophosphamide သည် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို တုန့်ပြန်သော သင်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလဲ ကျဆင်းစေသည်။ ကလေးများတွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါတချို့အား တခြားဆေးများနှင့် ကုမရတော့သည့်အခါ ဒီဆေးကိုသုံးပါသည်။
တခြားအသုံးများ – ဤအပိုင်းတွင် ပါဝင်သော အသုံးများသည် approved professional labeling တွင် စာရင်းပြုမထားသော်လည်း ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူမှ ညွှန်နိုင်သောအသုံးများဖြစ်သည်။ ဒီအပိုင်းတွင်ပါသောအသုံးများအား ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူမှ မညွှန်ကြားပဲ မသုံးရပါ။
Cyclophosphamide အား Lupus နှင့် Rheumatoid arthritis (အဆစ်အမြစ်ရောင်လေးဘက်နာရောဂါ) အင်္ဂါအစားထိုးကုသရာ၌ ထိုအင်္ဂါအား ပြန်တိုက်ရာတို့တွင်လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Cyclophosphamide အား ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ရပါမည်။ ဆေးပမာဏသည် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ အလေးချိန်၊ ကုသမှုအားတုန့်ပြန်မှုနှင့် တခြားသော ကုသမှုများ (ဥပမာ တခြား ကင်ဆာဆေးသွင်းကုဆေးများ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး) တို့ပေါ်မူတည်ပါသည်။ သင်သုံးနေသည့် ဆေးများအားလုံး (မညွှန်ပဲသောက်နေသောဆေးများ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသောဆေးများနှင့် အပင်ထွက်ပရဆေးများ) ကို ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပါ။
Cyclosporine နှင့် ကုသနေစဉ် ပုံမှန်ထက် ရေပိုသောက်ပြီး ဆီးပိုစွန့်ရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးအိမ်ဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆီးအိမ်ရှင်းစေရန် ရေဘယ်လောက်များ အကြိမ်ဘယ်လောက်များများ သောက်သင့်သည်ကို ဆရာဝန်အားမေးပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကို အတိအကျလိုက်နာပါ။
ဆေးတောင့်သောက်မည်ဆိုပါက တစ်ခုလုံးကိုမျိုပေးပါ။ ဆေးတောင့်အားဖွင့်ခြင်း ချေခြင်း ဝါးစားခြင်းများ မလုပ်ရပါ။ ပေါက်ပြဲနေသည့်ဆေးတောင့်နှင့်ထိမိပါက လက်ကိုပြောင်နေအောင် သေချာဆေးပါ။
ဤဆေးသည် အရေပြားနှင့် အဆုတ်မှတဆင့် စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိသောအမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည့်သူများ Cyclophosphamide အား မကိုင်တွယ်ရပါ။ သို့မဟုတ် ဆေးပြား ဆေးတောင့်များမှ ဖုံများအား မရှူမိစေရန် နေပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲနှင့် ဆေးပမာဏတိုးခြင်း သို့ အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ ကျန်းမာရောအခြေအနေပိုမကောင်းလာနိုင်သလို ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cyclophosphamide ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့်စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့်ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန်Cyclophosphamide ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Cyclophosphamideဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Cyclophosphamideအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ရေထွက်ပေါက်များမှဆေးချတာမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာအရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Cyclophosphamide အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့်အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးတစ်ခုအားသုံးရန် ဆုံးဖြတ်ပါက ကောင်းကျိုး ဆိုကျိုး နှစ်ခုကို ချိန်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အား သင်ရောသင့်ဆရာဝန်ပါ အတူတူ ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ဤဆေးတွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ဤဆေးနှင့် တခြားဆေးများအား ဓါတ်မတည့်မှုများရှိလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံဆေးများ သို့ တိရိစ္တာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူအား ပြောပါ။ ဆရာဝန်မညွှန်ပဲသောက်နိုင်သည့်ဆေးဆိုပါက ဗူးတွင်ပါသော အညွှန်းနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သေချာဖတ်ပါ။
ဤဆေးအား ကလေးများတွင် စမ်းသပ်ထားပြီး လူကြီးနှင့်မတူညီသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေကြောင်း သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဆေးအများစုအား အသက်ကြီးသူများတွင် တိတိကျကျ မလေ့လာထားရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ငယ်ရွယ်သူများမှာကဲ့သို့ တိတိကျကျ အာနိသင်ပြမပြ မသိရပါ။ cyclophosphamide သုံးခြင်းအား အသက်ကြီးသူများနှင့် တခြားအသက်အရွယ်များကြား နှိုင်းယှဉ်ချက် တိတိကျကျမရှိသော်လည်း ငယ်ရွယ်သူများနှင့် မတူညီသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပြဿနာများ ရှိမည်ဟု မထင်ရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။]
•	B=လေ့လာမှုအချို့အရ ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
•	D= ဆိုးကျိုးများရှိသည့် အထောက်အထားများရှိပါသည်။
•	X=သောက်သုံး၍မရပါ (လုံးဝမတည့်ပါ)။
•	N=အခြေအနေကို မသိရသေးပါ။
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်သည့် ဓါတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများဖြစ်သော အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း သို့ လျှာတွင် ဖူးယောင်ခြင်းများဖြစ်လျှင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။
ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်လျှင် ဆရာဝန်အား ဆက်သွယ်ပါ။
•	ဆီးနှင့် ဝမ်းတွင် သွေးများပါခြင်း၊ ဆီးသွားစဉ် နာခြင်း ပူခြင်း
•	အရေပြားဖျော့တော့ခြင်း၊ မူးမေ့လဲချင်သလိုလို ခံစားရခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ရခက်ခြင်း
•	ရုတ်တရတ် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့ အနေခက်ခြင်း၊ အသက်ရှူလျှင် တရွီရွှီမြည်ခြင်း၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ လှုပ်ရှားလျှင် အသက်ရှူမဝခြင်း၊
•	ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိသလို လက္ခဏာများ၊ ပါးစပ်နှင့် လည်ချောင်း နာခြင်း၊
•	သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း၊ မူမမှန်ပဲသွေးယိုခြင်း (နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မိန်းမကိုယ် သို့ စအိုတို့မှ)၊ ခရမ်းရောင်း သို့ အနီရောင်အပြောက်များ အရေပြားအောက်တွင် ပေါ်ခြင်း
•	ခေါင်းကိုက် အန်ပြီး ရေအလွန်ငတ်ခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်း
•	ပြင်းထန်သော အရေပြားလက္ခဏာများ – ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ သို့ လျှာတို့တွင် ဖူးယောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ အနီရောင် သို့ ခရမ်းရောင်အကွက်များထခြင်း (မျက်နှာနှင့် ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင်ပျံ့ခြင်း) ထို့နောက် အရည်ကြည်ဖုများထပြီး ကွာကျခြင်း။
တခြားသော အဖြစ်များသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ –
•	ပျို့ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း
•	အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ်
•	ခြေသည်းလက်ည်းများ အရောင်ပြောင်းခြင်း
တစ်ချို့အခြေအနေများတွင် cyclophosphamide သုံးနေစဉ် တစ်ဆင့်ခံကင်ဆာမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်း မှတ်တမ်းရှိ၏။ ဤဆေးနှင့်ပါတ်သတ်သော အန္တရာယ်နှင့် ကောင်းကျိုးများအကြောင်း ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအား ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – Cyclophosphamideသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့်ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန်သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။)
ဤဆေးအား အောက်ပါဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရပါ။ သင်၏ဆရာဝန်မှ အောက်ပါဆေးများနှင့်တွဲမကုရန် သို့မဟုတ် သင်သောက်နေသည့်ဆေးများကို ပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ Rotavirus Vaccine, Live ( ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး)
ဤဆေးအား အောက်ပါဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရပါ။ သို့သော် တစ်ချို့ရောဂါများတွင် တွဲရနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်ခုလုံး တွဲသုံးရန်ညွှန်ပါက သင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏ သို့ သောက်ရမည်အချိန်တို့ကို ပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။
ဤဆေးနှင့် အောက်ပါဆေးများကိုတွဲသုံးလျှင် တစ်ချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော ဆေးနှစ်ခုတွဲသုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ကုသမှုလဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်ခုလုံး တွဲသုံးရန်ညွှန်ပါက သင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏ သို့ သောက်ရမည်အချိန်တို့ကို ပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cyclophosphamideက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cyclophosphamideသည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့် –
•	ရေကျောက် (မကြာခင်မှဖြစ်ထားလျှင်လဲပြောရမည်)
•	ရေယုန် – ခန္တာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့သွားနိုင်သည်။
•	ဆီးကျောက်ရောဂါရှိလျှင် – Cyclophosphamide သည် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းရှိ Uric Acid (ယူရစ်အက်ဆစ်) ကိုမြင့်တက်စေပြီး ၎င်းအက်စစ်သည် ဆီးကျောက်နှင့် ဂေါက်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
•	ကူးစက်ရောဂါ – ကူးစက်ပိုးအား ခန္ဓါကိုယ်မှ ပြန်တိုက်နိုင်စွမ်း ကျနိုင်သည်။
•	ကျောက်ကပ်ရောဂါ – ခန္ဓါကိုယ်မှ မစွန့်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် Cyclophosphamide အာနိသင် မလိုအပ်ပဲ အများကြီးတိုးသွားနိုင်ပါသည်။
•	Adrenal ဂလင်းများ မထုတ်ခင် – Cyclophosphamide ၏ အဆိပ်အာနိသင် ပိုတိုးနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏ ထိန်းညှိခြင်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
•	အကျိတ်ဆဲလ်များစုခြင်း – အကျိတ်ဆဲလ်များ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီတွင်းသို့ ဖောက်ဝင်နိုင်ပြီး Cyclophosphamide ပမာဏများလျှင် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဖိနှိပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကင်ဆာရောဂါများအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အကြောထိုးဆေး။ ။ သူ့ချည်းပဲထိုးမယ်ဆိုလျှင် သွေးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါမရှိတဲ့ လူနာတွေအတွက် ကနေဦးထိုးဆေးပမာဏမှာ ၄၀ မှ ၅၀ mg/kg ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်ကျော်အထိ ထိုးရပါမည်။ နောက်တမျိုးဆိုလျှင် ၁၀ မှ ၁၅ mg/kg ကို ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်တိုင်း ထိုးရပါမည် သို့မဟုတ် ၃ မှ ၅ mg/kg ကို တစ်ပတ်မှ ၂ ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါသည်။
သောက်ဆေး ။ ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကနေဦးပမာဏ နှင့် ဆက်လက်သောက်သုံးရမည့်ပမာဏမှာ ၁ မှ ၈ mg/kg/day ထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ပထမရက်မှာ အကြောတွင်းသို့ ၆၀၀ mg/m2 ကို carboplatin (ကာဗိုပလက်တင်) သို့ cisplatin (ဆစ်ပလက်တင်)တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၈ ရက်ပြည့်တိုင်း တစ်ကြိမ်ပြန်ထိုးပေးရမှာပါ။
Multiple Myeloma အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
(M2 protocol အရ တခြားကင်ဆာဆေးတွေနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး)
ပထမတစ်ရက်မှာ 10mg/kg ကို အကြောထဲ ထိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကင်ဆာရောဂါများအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
Nephrotic Syndrome (ကျောက်ကပ်ရောဂါတစ်မျိုး) အတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ကလေးတွေမှာ အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ nephrotic syndrome ဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ biopsy (အသားစနမူနာစစ်ဆေးမှု) အတွက်သုံးမယ်ဆိုလျှင် သောက်ဆေးပမာဏ ၂.၅ မှ ၃ mg/kg/day ကို ရက်၆၀ မှရက်၉၀ ထိသောက်ရန် အကြံပေးပါတယ်။
Cyclophosphamide (ဆိုင်ကလိုဖော့စ်ဆမိုက်ဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cyclophosphamide ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂၅ mg ၊ ၅၀ mgဆေးပြားများ။
၅၀၀ mg; ၁ g; ၂ g ထိုးဆေးများ။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားသည့်အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးလွန်သော လက္ခဏာများ –
•	ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးခြေဥခြင်း သွေးယိုခြင်း
•	ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မောပန်းလွယ်ခြင်း အားနည်းခြင်း
•	လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားခြင်း သို့မဟုတ် တခြားသော ကူးစက်ရောဂါ လက္ခဏာများ
•	ခြေထောက်၊ ခြေကျင်းဝတ် သို့ ခြေဖဝါးများ ဖူးယောင်ခြင်း
Cyclophosphamide ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့်နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအားနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။